Garsooraha Scottish-ka ayaa ku tuuray loolankii lagu caweeyo ee baasaboorka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Scotland News Breaking » Garsooraha Scottish-ka ayaa ku tuuray loolankii lagu caweeyo ee baasaboorka COVID-19
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Entertainment • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Music • News • Dadka • Scotland News Breaking • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Sida uu dhigayo qorshuhu, goobaha Scotland qaarkood, oo ay ku jiraan meelaha lagu caweeyo, dhacdooyinka gudaha ee aan la fadhiisan karin oo ay ka badan yihiin 500 oo qof, oo taagan waqtiyada bannaanka oo ay joogaan in ka badan 4,000 oo qof oo ka qaybgalaya iyo dhacdo kasta oo leh in ka badan 10,000 oo damaashaad, waa inay hubiyaan in qof kasta oo ka weyn 18 jir laga tallaalay COVID -19.
Ururka Warshadaha Waqtiga Habeenkii, Scotland waxay dacwad ku soo oogtaa inay hor istaagto nidaamka baasaboorka tallaalka ee COVID-19.
Garsooraha Scottish -ka ayaa ka hor imanaya codsadayaasha, isaga oo sheegay in dawladdu ay aqbali karto hirgelinta qorshaha.
Ururka Warshadaha Wakhtiga Habeenkii, Scotland waxay ku dhalleeceysay hindisaha inay tahay "takoor" goobaha qaarkood.
Garsooraha Sottish, Lord David Burns, ayaa maanta diiday diidmo sharciyeed oo ku aaddan nidaamka baasaboorka tallaalka COVID-19 ee Scotland ee soo socda, isagoo dharbaaxo ku ah dacwad uu keenay Ururka Warshadaha Wakhtiga Habeenkii, Scotland kuwaas oo doonayay inay ka hortagaan in cabbirku dhaqangalo.
Xukunkiisa, Lord David Burns wuxuu ka soo horjeestay bayaannada codsadaha ee ahaa in nidaamku ahaa “mid aan habboonayn, aan caqli -gal ahayn ama aan caqli -gal ahayn” ama meel -ka -dhac ku ah xuquuqda aadanaha.
Marka loo eego xukunka garsooraha, qorshuhu wuxuu hoos yimid waxa ay dawladdu aqbali karto inay fuliso sidii wax looga qaban lahaa masiibada iyo inay ahayd "isku day lagu doonayo in wax looga qabto arrimaha sharciga ah ee loo aqoonsaday hab dheelitiran".
Garsooraha ayaa sidoo kale sheegay in nidaamka ay hoos imaan doonaan baarlamaannada iyo wasiirrada, kuwaas oo waajib ku ah sharciga inay ka saaraan xeerarka aan hadda looga baahnayn inay ilaaliyaan caafimaadka dadweynaha.
La -taliyaha Boqoradda (QC) Lord Richard Keen, oo ah qareenka u doodaya Ururka Warshadaha Wakhtiga Habeenkii, Scotland, ayaa ku tilmaamay hindisaha inuu yahay “takoorid” ka dhan ah goobaha qaarkood ee Maxkamadda Fadhiga, wuxuuna yiri “xuquuqda aasaasiga ah ee sharciga ah” ee codsadeyaashu waa in la ilaaliyo.
Isagoo u hadlaya dowladda Scottish -ka, QC James Mure wuxuu hordhigay in qorshahan la naqshadeeyay markii Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) uu aad u xumaa masiibada darteed. Sida laga soo xigtay Mure, nidaamku wuxuu raadinayaa inuu furnaado goobihii u badnaan lahaa halista gudbinta iyo sidoo kale in lagu dhiirrigeliyo dadka inay soo baxaan oo la tallaalo.
Marka la eego nidaamka, waa hubaal ScotlandGoobaha, oo ay ku jiraan meelaha lagu caweeyo, dhacdooyinka gudaha ee aan la fadhiyin oo ay ku jiraan in ka badan 500 oo qof, oo taagan waqtiyada bannaanka oo ay joogaan in ka badan 4,000 oo ka soo qeybgale iyo dhacdo kasta oo leh in ka badan 10,000 xaflado, waa inay hubiyaan in qof kasta oo ka weyn 18 sano laga tallaalay COVID-19.
Dowladda Scottish -ka ayaa sheegtay inay siisay meheradaha ay saameeyeen laba toddobaad laga bilaabo hirgelinta qorshahan, oo la bilaabi doono Jimcaha, si ay “u tijaabiyaan, ula qabsadaan oo u dhisaan kalsoonida hababka wax ku oolka ah” ee loo baahan yahay ka hor inta aan la dhaqan gelin 18ka Oktoobar.
Marka loo eego tirakoobka dowladda UK, 92% reer Scotland ayaa qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay ee coronavirus, halka in ka badan 84% labanlaabay.